Paositra kaody API - Fahazoana angona amin'ny kaody manerana izao tontolo izao
Mikaroha kaodim-paositra, mahazoa ny kaodim-paositra rehetra lavitra sy maro hafa amin'ny API kaodim-paositra.
Data manerana an'izao tontolo izao
Jereo ny vidiny
Vakio ny antontan-taratasy
Mora ampiasaina API
Ny PostalCodes.app dia fitaovana iray ahafahanao mahazo vaovao momba ny kaodim-paositra samihafa manerantany. Azonao atao ny mahazo kaody paositra amin'ny halavirana kilometatra na kilometatra, na mahazo ny antsipirian'ny kaodim-paositra amin'ny ankapobeny.
GET Makà kaody paositra ao anatin'ny halavirana
Amin'ity endpoint mora ampiasaina ity dia hahazo ny lisitry ny kaodim-paositra izay ao anatin'ny halaviran-toerana iray. Ny ohatra fangatahana dia hamerina ny lisitry ny kaodim-paositra tsy manam-paharoa, ny lisitry ny kaody paositra ary ny antsipirian'ny kaody paositra tsirairay.
Manaiky ny refy halaviran-kilaometatra (Default) na kilaometatra ny API anay.
Mba hanovana ny refy ho kilometatra dia tsy maintsy apetrakao ny ms amin'ny fangatahanao:
Ho toy izao ny valiny:
GET Makà pitsopitsony kaody paositra
Ity ohatra manaraka ity dia hamerina ny antsipirian'ny kaodim-paositra izay mifanaraka amin'ny fangatahana fikarohana.
GET Makà angona manokana
Azonao atao ny handeha fanampiny params mba hahazo afa-tsy izay ilainao eo amin'ny vokatra, fa ilaina fotsiny manampy fields ao ny fangatahanao.
+94 Firenena tohana
CZ (Repoblika Tcheky)
DO (Repoblika Dominikanina)
FO (Nosy Faroe)
GB (fanjakana Mitambatra)
GF (Guyane frantsay)
GG (Guernsey sy Alderney)
HR (Kroaty (Hrvatska))
KR (Korea Atsimo)
MH (Nosy Marshall)
MP (Nosy Mariana Avaratra)